Wax siiya bulshada | Laga soo bilaabo Linux
Wax siiya bulshada
nano | | GNU / Linux, Kuwa kale
Ha walwelin, waxba ma dhajin doono wixii ku saabsan sawir-gacmeedka ama qaybaha garaafka, Elav y Gara iyaga ayaa lagu amrayaa inay u qabtaan taas (XD) ... Markan waxaan taabanayaa mowduuc ka milicsiga badan wax kasta oo kale, oo ah inaan dib ugu celiyo wax siinta bulshada inteeda badan ee si naf hurnimo ah inoo siisay, ma doonayo inaan ka dhawaajiyo hadal ama buunbuunin, laakiin waxaan dareemayaa Waxaa xusid mudan in Software-ka Bilaashka ah, ee ka baxsan GNU / Linux, uu beddelay nolosha in kabadan hal, oo aan kujiro aniga.
Ha igu qaldan, maahan in tani ay aniga ila mid tahay diin, laakiin waxay bedeshay noloshayda jaamacadeed waxayna ku hanuuniyey wadadayda xagga hore, waxay i tustay inay jiraan wax dhaafsiisan u shaqeynta dadka kale oo aad ka wada shaqeyn karto kuwa kale iyo inaanan daruuri u baahnayn inaan iibiyo barnaamijkeyga softiweerka ah si aan lacag u helo, laakiin softiweer wanaagsan ayaa iiga hadli doona wax ka badan dufanka resume oo ay ka buuxaan tixraacyo ... Sikastaba, tani waxay ahayd wax aan kala hadlayo saaxiibkey, wuxuu si toos ah ugu shaqeeyaa waxyaabo qaab ahaan .deb, hadafkeedu waa in loo fududeeyo dadka adeegsada qaybinta iyadoo lagu saleynayo Debian xirmooyinka, ciyaaraha, barnaamijyada asaga ama asxaabta kale ay abuuraan una ogolaadaan inuu balaariyo, wuxuu ka mid yahay kuwa adeegsada ee runti daneeya in wax la siiyo iyada oo lagu badalayo wixii uu helo, iyo in la joogo Venezuela waa wax aad u adag in lagu daro doolar mashruuc kasta , sidaas ayaa had iyo jeer la siiyaa si ay u xirxiraan, imtixaan, imtixaan iyo liis dheer oo waxyaabo ah (u isticmaal laanta sida kanaalka caadiga ah sid de Debian waxayna si joogto ah u soo sheegaan cayayaan kasta oo ay arkaan). Dabcan, taasi waa kiiska shakhsiga ah ee saaxiibkay (kaas oo aanan ku xusin magac madaama aanan garanayn hadii aan sheego iyo raali iga ahaw) kaasoo dareensan inuu ku dhaqaaqay go'aankiisa inuu sameeyo waxa uu sameeyo, laakiin kulligeen ma wada awoodno ama ma dooneyno inaan degno Debian oo beddel isha.list si aad u isticmaasho sid, qaarkeen baa adeegsada Mint, Ubuntu, Arch, Slackware, Suse, iwm, iwm, ... Wadahadal dhexdiisa su'aal aad u fudud laakiin qoto dheer ayaa ka soo baxaysa mawduuca:
“Maxaan sameyn karnaa si aan dib ugu celino bulshada inteeda badan nasiisay? Maxaad sameyn laheyd
Uma aanan qaadin xanuun ka soo wajahay wejigayga "Waan sameeyaa adiguna maysid", laakiin wicitaan baraarujin ah, wax ujeedo gaar ah u leh ka fikirida qaab kale oo aan ku caawiyo kuwa i caawiyay waana tan meesha ay ka jiraan waxyaabo badan oo badan oo aan sameyn karno. Xaaladdayda, software bilaash ah iyo GNU / Linux Iyagu macno ahaan waa jaamacaddeyda, waxaan si toos ah wax uga bartaa dadka kale mashruucyadooda, casharradooda la wadaago, fiidiyowyadooda, qaladaadkooda, talo bixinta liisaska dirista, dhacdooyinka iyo waxyaabo kale oo badan. Qaabka aan ugu soo celiyo waxan oo dhan waa anigoo sii deynaya koodhka layligayga, aniga qudhayduba waxaan samaynayay liis layliyo ah inaan ku sameeyo Python, oo leh tusaalooyin iyo kuwo kale. Waxaan kaloo ka shaqeeyaa casharro oo waxyaabo ayaan googoogayaa isku soo wada xorayaa ka dibna sii deynayaa (gudaha madasha beeshan, habka), Waxaan halkaan ku qoraa, ikhtiyaari ahaan iyo aragtidayda si qof kastaa uu naftiisa u siiyo fikradaha waxa uu qaban karo (haddii uu doonayo) si uu u caawiyo bulshada oo dhan. Waxaan damacsan ahay inaan u abuuro softiweer jawiga desktop-ka aan ugu jeclahay oo aan sidaa ku dhammaystiro, yaa se garanaya waxa kale ee aan ka fikiri karo. Waxa kaliya ee aanan sameyn karin, ama ay igu adagtahay aniga, waa inaan ku deeqo lacag, maahan inaanan rabin, laakiin waa run ahaantii aniga ayaa igu kacaya oo aad ayey iigu kacaysaa.
Laakiin dabcan, kulligeen ma wada tabaruci karno lacag ama qof walbaa aqoon uma laha barnaamijyada, qaar baa naqshadeeyayaal ah, qaar kalena waa qoraayaal, kuwa kalena si fudud wax kasta oo kale oo ka mid ah kumanaanka waxyaalood ee adduunkan ka jira, laakiin kulligeen waxaan leenahay SWL iyo taas dhamaanteen waxbaan siin karnaa, xitaa haddii uu yar yahay, laakiin waan awoodnaa.
Haddii aad tahay naqshadeeye, ka dib u samee nashqado qaabab bilaash ah, dhammaystiran iyo lakabyo, iwm, si kuwa kale uga faa'iideystaan. Abuur xirmooyinka qurxinta desktop-ka, ka shaqee naqshadaha mashaariicda, waxkastoo ay ahaatoba.
Hadaad wax qorto ka dib ku biir blog, qor shaqadaada oo sii daa, dadka kale baro inay isticmaalaan qalabka aad isticmaasho, waxbadan baro oo waxbadan baro ...
Isku day noocyada alfa, beta, RC. U dir cayayaanka horumariyeyaasha.
Haddii aad wax ka ogtahay, u gudbi aqoontaas, taasi waa waxa adduunkan oo dhami ku saabsan yahay, barashada, wadaagista iyo koritaanka. Waxa aan maanta sameeyo ayaa berri u adeegi doona qof kale, iyo wixii la mid ah.
Dadyahow, fursadaha waxaa ku xaddidan oo keliya rabitaankeenna ah inaan wax qabanno waana taas fudud, waxaan ku dhashay inaan sameeyo waxa aan sameeyo waana ku raaxeystaa, taasna ma ihi waxaan ahay Taalibaan, Hippie, riyo ama miskiin; Waxaan ku noolahay noloshayda waxaanan talaabooyin uqaadayaa sidii xirfadle kumbuyuutar mustaqbal, laakiin quruxda tan ayaa ah inaysan ku koobnayn kaliya saynisyahanada kombiyuutarka, laakiin qofkasta oo raba inuu ku raaxeysto wax ka duwan, waxa dadka kale aysan haysan, la xiriir aadanaha oo ku jira waxaas oo dhan oo inagu xeeran iyo dareenkaas oo ah in qofna uusan kaaga tagi doonin wax xun, in qof walbaa isku dayayo inuu ku caawiyo inta ay kari karaan, oo aan lagugu qasbin inaad wax sameyso ama wax ka noqoto.
Waxaan u maleynayaa inaysan jirin wax intaa ka badan oo la dhaho, waa wax si fudud u habboon in la isku dayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Wax siiya bulshada
40 faallooyin, ka tag taada
Sida Cuba oo kale? Ummu sida ay u xiisayso uma arko isku ekaanshaha, sidoo kale oday waad ku saxantahay faallooyinkaaga, tusaale ahaan ma aqaano sida wax loo barto (oo aan rabo inaan wax barto), laakiin tan iyo markii aan jaamacadda ku jiray waxaan Linux la wadaagay dad badan iyo kuwa badan dadku way i aaminaan inay jirto, sidaas oo kale markaan tijaabiyo waxaan tijaabin karaa noocyada tijaabada.
Marka waa inaan wada wadaagno fikirkaas, anigu waxaan ahay makaanik, waxaan jeclaan lahaa inaan barto cilmiga kombuyuutarka laakiin badanaa waxaa ugu wacan waqtiga oo aan awoodi waayey, dhowaan way noqon doontaa.
Ku jawaab kondur05
@nano maqaal aad uwanaagsan oo wax walba ka sarreeya sida fekerka leh + 1 ...
Waxay yihiin Link dijo
Milicsiga weyn oo aan la wadaago.
Waxaan wax ku qoraa waqti ka waqti boggeyga, waxaan hayaa dhowr mashruuc oo dhammaantoodna ka hooseeya GPLv3, sawir-qaadayaashayda iyo qaar ka mid ah shaqooyinka garaafka leh ee ku hoos-jira Creative Commons. iwm
Waxaan jeclaan lahaa inaan waxbadan lashaqeeyo, laakiin nasiib daro heerkeyga ingiriisiga ah ma ahan mid aad u sareeya, taas oo iga hor istaageysa ilaa xad inaan la shaqeeyo ama aan ka warbixino cilladaha, iwm.
Bisha soo socota waxaan ku sugnaan doonaa dunida Linux muddo 6 sano ah, waxaana rajeynayaa inay jiri doonaan kuwo badan oo iskaashi badan yeelan doona ^^
Jawaab Son Link
Waqti ka waqti ayaan ku daabacaa casharro, xitaa haddii aysan ahayn meel gebi ahaanba loogu talagalay Linux. Waxaan u maleynayaa inay si fiican isugu dhafan yihiin milicsiga aan ka qabo bulshada, hanti-goosadnimada aadanaha, iwm. Maaddaama GNU / Linux ay leedahay dhinac tilmaamaysa qiimayaal aad u gaar ah, iyo fikradaha ku saabsan horumarka ee aan ku raacsanahay, waxaan u arkaa in joogitaankiisa balooggeygu uu ka badan yahay wax qiil leh.
Isla marka aan barto wax laga yaabo inay dadka kale u faa'iideystaan, ayaan geliyaa oo soo dhajiyaa, si dhibic ah ayaan u sharxay. Haddii aan ogaan lahaa sida barnaamij loo sameeyo naftayda ayaan u huri lahaa, laakiin sidaan horayba ugu sheegay gelitaan kale oo ku yaal boggan, mid kastaa wuxuu ku darsadaa wuxuu yaqaan.
Ku jawaab Wolf
Maqaal aad u wanaagsan oo feker leh.
Ma lihi xirfado barnaamij. Waxa aan sameeyo waa inaan u turjumaa barnaamijyada Isbaanishka waxaanan ku hayaa dhowr xirmo archlinux aur.
Ku jawaab si aad u xun
dabogal 92 dijo
Fikradayda waan dhiibanayaa. Haddii aan waligey wax ka caddeyn jiray, waa inaan necbahay shaqada oo ay igu dhibayso inay iga codsadaan inaan wax qabto. Aniga oo tixgelinaya wixii aan horay u sheegay haddii aan qabto shaqo fudud, waxaan barnaamij ka sameeyaa softiweer fudud, waxaan ku sii daayaa bsd ama gpl hoostiisa, laakiin haddii aan haysto shaqo ay igu kalliftay saacado iyo saacado, muddo sannad ah, ka dib dabcan waxaan ku sii daayaa hoosta liisanka gaarka loo leeyahay ama ugu yar ee lacag bixinta ah, ugama shaqeyn si bilaash ah qofna tanina ma noqonayso bilowgeeda.
Waxaad arki doontaa in haddii digaag kulul kuu sheegto, inaad si xor ah uga shaqeyso haha
Jawaab ku dhiiran
Xaaladdaas, waa inaan si taxaddar leh uga fikirno XD.
Ama sidoo kale sababtoo ah waxaad dareentay taas, maahan inay wax kuu sheegaan.
Waxaan horeyba ula soo kulmay labada kiisba, in kasta oo midkood ka mid ah eeddadu ay ahayd guddi foolxun oo fool xun oo leh indho indho, laakiin waxay ahaayeen sababaha ugu waaweyn haha
Naag Jabaaniis ah hadday tidhaahdo, iyadu iyadaa aan ka fiirsan.
Ku jawaab Windóusico
Xaq, pandev92 wuxuu leeyahay dhadhanka dameerka
Midka dabada ku hayaa waa adiga, wiil yaroo XD
Waxaad la yaabi lahayd
Ostia Courage waxay isticmaaleysaa Ubuntu!, Midka soo rogaya xD
Max 6.0 ee machadka
Qof walba fikirkiisa ayuu ka qabaa tan.
Aniguba kuma shaqeeyo bilaash, laakiin taasi kaliya shaqada dhabta ah, anigu ma ihi saynisyahan kumbuyuutar iyo waxa aan barnaamij ka sameeyo waxaan u sameeyaa hiwaayad ahaan, ma ahan inaan lacag ama wax kale helo (marka laga reebo, dabcan, qof ayaa raba inuu i siiyo lacag si aan u sameeyo barnaamij)
Waan sii wadi doonaa inaan sii daayo dhammaan mashaariicdeyda, hadey qaateen saacado, maalmo, toddobaadyo, bilo ama sannado.
Hagaag, faallooyinkaas waxaad kaliya muujineysaa inaad waxbadan ka taqaanid dhaqanka bilaashka ah iyo softiweerka bilaashka ah, maadaama aad wali madaxaaga ku hayso barnaamijka softiweerka ah ee bilaashka ah = ushaqeynta bilaashka ah, ee ku badan "aduunyada" gaarka ah.
Waxay kuxirantahay xaalada, mararka qaarkood inaad kasbato khibrad waa inaad ku shaqeysaa bilaash ama lacag aad u yar.
Waxa kale oo jira dad wax u qabta hiwaayado ama sadaqo, saacado badan u shaqeeya si ay shakhsi ahaan ugu qancaan.
Sidoo kale maadaama barnaamijku lacag la’aan yahay macnaheedu maahan inaanu macaash doon ahayn, bilaashku ma aha kan bilaashka ah, waa laba shay oo kala duwan.
Dayaanna x dijo
Waxaan u arkaa horumarinta Software-ka Bilaashka ah maalgashi mustaqbalka ah. Barnaamijka aad u murugsan ee aad kobciso waxaad uruursataa xirfado badan, waxaad baraneysaa luqado badan oo barnaamijyo ah, ficil ahaan kama qori kartid wax lambar ah sababta oo ah inta badan koodhka aad ku isticmaasho barnaamijyadaada waxaa laga qaadan karaa mashaariic kale, waad guurtaa aad u dhakhso badan, oo xitaa waxaad halkaa ku gaadhsiin kartaa heer ay xirfadahaagu kuu oggolaadaan inaad noqotid barnaamij-yaqaan heer kernel-barnaamijye, taasina waa mid soo jiidasho leh shirkado badan.
Maaddaama aad tahay horumariye softiweer ah oo lahaansho leh, liddi ku ah, ma awoodi doontid inaad si xor ah u qaadatid lambarro marar badanna waa inaad wax walba ka soo bilawdaa xoqdo, si aad u hesho helitaanka aqoon gaar ah oo ay tahay inaad bixiso, qaar badan oo ka mid ahna weli waa la mamnuuci doonaa, iyadoo aan suurtagal ahayn in laga sii gudbo wixii la oggol yahay.
Waxaa jira weedho aan jeclahay, waxaanan u malaynayaa inay si fiican u garanayso macnaha ay leedahay horumarinta Software-ka Bilaashka ah taasna waxay tahay in horumarinta Software-ka Bilaashka ahi ay la mid tahay istaagga garbaha kooxaha waaweyn. Maanta waxaan ka bilaabayaa meel aad u hooseysa, laakiin berrito waxaan la joogi karaa xagga sare anigoo la jooga kuwa waa weyn.
Dhinaca kale, horumariyeyaasha softiweer lahaanshaha ayaa had iyo jeer ka bilaaba kuna dhammaada isla sagxadda haramka halka la dhigay, laga yaabee inay u wareegayaan dhinac, laakiin weligood kor iyo hoos uma socdaan.
Dhinaca kale, waxaan kuu xusi karaa mashaariic badan oo bilaash ah oo wax ku ool ah oo wax ku ool ah iyo meelaha ay horumariyayaashoodu gaajaysanayn, tusaale: Mashruuca Blender, KDE iyo Gnome developers, Linux kernel developers, Debian developers, RedHat iyo shirkadaha Canonical, iyo dhowr kale.
Lacagta la kasbado wax shaqo kuma laha sameynta Software bilaash ah ama lahaansho ah, helitaanka lacagtu waxay la xiriirtaa ogaanshaha sida loo sameeyo ganacsi wanaagsan.
Haddii walaacaagu yahay inaad lacag ku kasbato Software Bilaash ah markaa waxaad isticmaali kartaa nidaamka lacag soo degsashada, waxaad isticmaaleysaa keyd sir ah oo khaas ah, oo markii isticmaalehu rabo inuu soo dejiyo barnaamijkaaga marka hore waa inay lacag bixiyaan, markay sameeyaanna, waxay hel labadaba barnaamijka iyo koodhka isha iyo liisanka bilaashka ah.
Faallo aad u fiican, ereyadaadu runtii way soo baxeen bro… Hambalyo 😉
sax ah dijo
Waxaan wax ku darsaday bulshada Slackware Linux anigoo abuuraya SlackBuilds uguna soo shubaya bogga mashruuca. Waxay la mid tahay barnaamijyada wax lagu duubo, marka laga reebo in xirmada la soo uruuriyay aan la keenin, laakiin ay tahay qoraal la soo duubay, qaabkan adeegsadaha ayaa awood badan ku leh calanka ay ku darayaan ama ka saarayaan ama qaab dhismeedka ay soo uruurinayaan si ay u horumariyaan waxqabadka, iwm. 🙂
Ku jawaab si sax ah
Nano heer sare ah, aad u fiican excellent ^^
Waa wax isku mid ah oo aan u malaynayo, wax ku biirinayo, wax ku barto, dhagaysto oo aan la wadaago. Taasi waa waxa runtii muhiim ah halkan.
Milicsiga wanaagsan, salaan.
arrinku waa jilicsan yahay laakiin kama fikiro lacag-bixinta. Xaqiiqdii, maanta barnaamijyada bilaashka ah ayaa ah kuwa ugu qiimaha badan waxaanan ka shaqeeyaa horumarinta webka, marka waxa aan kaligey ku barto barnaamijkeygu waa iska caadi jaceylka waxa aan sameeyo. Halkaas qof kasta oo doonaya inuu iibiyo barnaamijkooda, ugu dambayn had iyo jeer way jabiyaan oo waxay dhaliyaan khasaare, aniga qaybtayda waxaan ka helay shaqooyin yar yar oo kaliya si aan u muujiyo koodhkayga. Hagaag waxaan arkay Pandev waxaan rajaynayaa in lacag lagaa siin doono maxaa yeelay layma siin XD
Waxaan kugu soo dalacayaa waxaad u baahan tahay XD, tusaale ahaan soo saare minitube wuxuu iibiyaa nooca OSX waana qiimeeyaa, xitaa haddii ay ku kacayso € 10. Haddii ay si fiican u jajabiyaan, waxna ma dhacaan, marwalba waxaa jiri doona qof ku dambeeya bixinta lacagta barnaamijka, haddii aad lacag la’aan ku dhigto, dadku waxay la qabsadeen in aysan wax tabarucaad bixin sababta oo ah waxay leeyihiin * wax badan baa barnaamijka kale ka fiican, maxaa yeelay Waxaan ku deeqayaa midkan *. Uma huri doono noloshayda horumarinta softiweer, laakiin markaan sameeyo mid, haddii aan in ka badan 6 bilood shaqeynayay, ha ka welwelin, waxaan bixin doonaa haa ama haa xD.
Aniga shaqsi ahaan waxaan bilaabay qorista baloog (mid kale) oo ku saabsan LMDE. Waxaan sidoo kale doonayaa inaan ku turjumo buuga LMDE ee ku yaal goobta altervista Isbaanish.
Ku jawaab Diazepan
Sida asxaabta kale ay dhaheen, qasab maahan inaad noqotid barnaamij wax ku darsado (waxaan hayaa aqoon guud oo barnaamij, laakiin anigu iskuma arko inaan ahay barnaamijye wanaagsan).
Maxaa intaa ka sii badan, xaqiiqda xaaladaha qaarkood oo si toos ah wax uga taraya mid, waxaan ku cabirayaa dhowr tusaalooyin shaqsiyeed:
Waxaa jiray waqti marka, ugu yaraan ra'yigayga, tarjumaadda LXDE ay ka tagtay waxyaabo badan oo la doonayo, waxaanan ogaaday in ka dib markii noocyada qaar wax ka soo fiicnaadeen, markaa halkii aan ka sugi lahaa, waxaan go'aansaday inaan isbeddel ku sameeyo aniga naftayda: Waxaan saxiixay tarjumaan ahaan, waxaan waxoogaa sixitaan ah ku sameeyay tarjumaada jirta waxaanan u turjumay wax kasta oo cusub, oo aan ku weheliyey turjubaano kale xagga higaada, naxwaha iyo hubinta iswaafajinta qaybaha, dadaalkeygana waxaa lagu abaalmariyey seddex siyaabood oo kala duwan:
Ugu horreyntii, LXDE hadda waxay leedahay tarjumaad Isbaanish ah oo ugu yaraan u muuqata mid la aqbali karo aniga (in kasta oo aan daruuri ahayn mid dhammaystiran), taas oo si cad u anfacday aniga oo keliya, laakiin sidoo kale inta kale ee ku hadasha luqadda Isbaanishka ee LXDE.
Ta labaad, hadda waxaan ka muuqdaa dhibcaha modullada ay ka mid yihiin, markaa tani waxay ka mid noqotay manhajkayga.
Marka seddexaad, darnaanta iyo adkeysigeyga tarjumaadda mashruuca ayaa kadhigtay isku-duwayaasha kooxda tarjumaadda inay isiiyaan rukhsad xagga maamulka iyo isku-dubbaridka ah (oo aanan waligey dhab ahaan ugu talo gelin).
Si la yaab leh, in kasta oo aan wali ku darsado mashruuca, in muddo ah ma aanan isticmaalin LXDE, laakiin GNOME (adoo adeegsanaya LMDE)
Tusaale kale ayaa igu dhacay aniga oo la socda mashruuca LDAP Account Manager, maadaama aan ku arkay khaladaad ku jira tarjumaadda jirta. Waxaan u diray horumariyaha nooc saxan wuxuuna ii sheegay inaan sifiican uga shaqeeyo tarjumaada nooca xiga, oo ku sigtay inuu soo baxo. Sidii baan yeelay oo aqoonsi ahaan ayuu si bilaash ah iigu soo diray nooca xirfadeed.
Marka laga reebo tusaalooyinkaan, goorta aan iskaashi la sameyn karo waxyaabo kale oo yar yar laakiin taasi gacan ka geysaneyso hadhuudh bacaad ah, ha noqoto muujinta faallooyinka boggan, ama talooyinka qaarkood ee kooxda NOVA (oo aan markii dambe ogaaday in qaarkood xitaa ku soo galeen mashaariicda qoraalka), iwm.
Hagaag, sidoo kale waxaan kaqeybqaataa iskuduwaha GUTL, iyo maamule / dhexdhexaadiyaha / tifaftiraha qaar kamid ah howlaha ay bixiso, marka lagu daro caawinta liisaska, markaan awoodo.
Akhlaaq ahaan: inaad tahay barnaamij-yaqaan muhiim maahan in bulshada wax loogu celiyo.
Ku jawaab Hugo
Jamin samuel dijo
Milicsi aad u fiican \_ O / Anigu weli ma ihi barnaamij yaqaan caan ah, laakiin waxaan ku soconaa wadadii aan ku sameyn lahayn xD halka aan ku faafiyo isticmaalka softiweerka lacag la'aanta ah qofkasta oo iga gudba wadadeyda.
Runtii jaamacaddeyda waxay iigu yeeraan "Free-man" jaceyl dartiis AJAJAJAJAJAJAJAJA laakiin waxaan horeyba ugu guuleystey inaan 4 kamid ah asxaabteyda kahelo gacanta ubuntu xD marka laga reebo midka booqdey ksa oo arkay i lint mint oo ogaadey sida ugu fudud ee aan waxwalba samee adigoon rakibin waxabahaahahahaha
Sikastaba salaanta weyn 😉
Jawaab Jamin Samuel
Waan ixtiraamayaa ra'yiga dadka kale, laakiin waxaan aaminsanahay in haddii ay mudan tahay in la soo celiyo wax ay bulshadu innagu soo kordhisay, siyaabo badan iyo haa, mararka qaarkood (haddii aysan u badnayn) waxaad arkaysaa oo keliya barnaamijyada beddelka ah ee lagu kordhin karo bulshada, in kasta oo aan wax ka aqaan barnaamijyada (sida arday kasta oo injineernimo ah) kama xukumayo illaa iyo hadda, xitaa naqshadeeye sidaas darteed waxaan u sameeyaa wixii aan awoodo, waxaan ku siiyaa aqoontayda yar barmaamijyada wixii aan awooday inaan ku barto si isku mid ah irc (kiiskeyga Mint iyo Ubuntu) dhawaana waxaan noqon doonaa rakibayo softiweer bilaash ah FLISOL oo ka dhici doona magaaladeyda. Marwalba siyaabo ayaa jira, waana u qalantaa.
Kaliya waxaan sameeyaa waa cabashada x_X
Haddii jiilalkeennu aysan baran inay wanaag la wadaagaan, oo ay aqoonta la wadaagaan, yaanan laga sugin inay kuwa kale noo qabtaan.
Ku jawaab alunado
Sidoo kale, cidina ma sameyso, waxaan leeyahay cabasho ka furan tomahawk bugtracker oo ku saabsan maareynta heesaha Spotify, halkaas oo ay kaliya kuu muujineyso 20, si fiican, wax la hagaajin lahaa laba saacadood gudahood, waxay qaadataa 4 bilood jawaabna kama lahan.
“Maxaan sameyn karnaa si aan dib ugu celino bulshada wax badan ina siisay? Maxaad sameyn laheyd?
mmm ... koobkayga kafee ka iibi dukaanka ubuntu ... e '
PS: Boostada aad ufiican, aad ufiican
Waxaan doonayay inaan barto Python-ka iyo GTK waqti dheer, si aan u sameeyo wax la mid ah gudi xulasho oo mideysan oo loo yaqaan 'LXDE', kaasoo si fiican kuu qaban lahaa… Malaha waa waqtigii la bilaabi lahaa.
Ku jawaab AurosZx
Patrizio santoyo dijo
Maqaal aad u fiican!
Kuwo badan ayaa si isku mid ah u fikiraya, waana wax wanaagsan in noocyada maqaallada ah halkan lagu daabaco oo caddeeya waxyaabo aan la aqoon. Maxaa la sameeyaa si wax loogu celiyo bulshada Sida qaar badan oo kale, anigu ma ihi barnaamij-yaqaan, waan jeclahay oo dareenkeyga ayay igu soo jeedineysaa, runtii waxaan baranayaa Python, laakiin ma dhihi karo waan ku fiicanahay. Xitaa sidaas oo ay tahay, waxaan ka mid ahay koox adeegsada gnu / linux, waxaanan dareemayaa in shaqada la qabtay ay wanaagsan tahay in wax yar laga soo celiyo in badan oo naloo siiyay. Fidinta waa shaqadeena, ka saarida indha shareerka dadka kale ee ku nool fekerka xitaa maalmahan oo Linux horeyba si ballaaran loogu isticmaalay, taas oo keli ah khubarada, taas oo aan run aheyn gabi ahaanba. Bisha Abriil waxaan lahaan doonnaa dhacdada FLISOL (Latin America Free Software Installation Installation) halkaas oo aan nafteenna u siin doonno hawsha ah inaan sii faafinno!
Mar labaad Hambalyo kuwa ka kooban "desdelinux", shaqo weyn.
Jawaab patrizio santoyo
Waxaan la abaabulayaa FLISOL magaaladeyda kuwa ka mid ah Kooxda isticmaaleyaasha ee 'Linux Group', sidaa darteed waxaan horey u qabtay shaqadayda guriga ee xD
Waxaan ahay barnaamij Java ah, oo aan wali pro: p, waxaan isku dayay inaan sameeyo barnaamij samayn lahaa .desktop faylasha oo u adeegi lahaa astaamaha lubuntu.
wali qaladkeedu wuu jiraa. Waxaan sidoo kale isku dayay inaan u sameeyo koox tarjumaad majaladda ubuntu, laakiin ma jirin cid ka tirsan aaggayga oo la dhiirrigeliyey. Waxaan jeclaan lahaa inaan wax ku darsado laakiin hada waqtiga ayaa igu yaraaday.
Jawaab Arturo Molina
Waan ka xumahay eray-soo-celinta
samee barnaamij sameeya feylal
Lithos 523 dijo
Maqaal aad u wanaagsan.
Xaqiiqdii, maqaalka laftiisu waa waddo wax lagu darsado, maxaa yeelay wuxuu fidiyaa aqoonta SW bilaashka ah iyo sida iyo sababta uu u koro.
Oo milicsiga noocan oo kale ah wuxuu ahaa sida boggeygu u dhashay, taas oo ah habka ugu hooseeya ee aan sidoo kale isku dayo inaan wax ugu celiyo bulshada.
Ku jawaab Litos523
Saldhigga: Tusaalooyinka leh amarka Raadi
Ku fur menu-ga codsiyada 'Xfce' furaha